Vaovao - Ho avy ny vanim-potoanan'ny fampirantiana an-tserasera - Sourcing any Paris / Sourcing amin'ny Magic Online
Ny virus corona dia manova ny fampirantiana ho serivisy an-tserasera. Ny andraisantsika anjara amin'ny volana septambra 2020 izao dia ireto manaraka ireto: ny Sourcing Paris any amin'ny fitafiana (1,2020-28 septambra 2020) ary ny SOURCING ao amin'ny MAGIC Online (15 septambra 15 desambra 2020)
Ny akanjo Sourcing Paris sy ny Shawls & Scarves dia fampirantiana iraisam-pirenena ho an'ny lamaody karakarain'i Messe Frankfurt France (MFF). Ny fampisehoana dia hiarahana amin'ny Avantex, Leatherworld, Texworld ary Texworld Denim Paris, izay atao in-droa isan-taona ao amin'ny kianja Le Bourget ary hisarika mpitsidika matihanina an'arivony maro manerantany.
Ny SOURCING ao amin'ny MAGIC Online dia manome ny manam-pahaizana manokana fidirana fidirana amin'ny fiombonambe iraisam-pirenena mpamokatra, mpamatsy ary mpanome serivisy iraisam-pirenena, nomerika. Ny mpanatrika dia afaka mizaha ny tsena niomerika amin'ny alàlan'ny safidin'ny sivana fikarohana isan-karazany amin'ny sehatra mora ampiasaina namboarina miaraka amina mpamorona lamaody sy mpamatsy rojom-pitantanana.
Fanindroany izao isika amin'ny seho an-tserasera. Manangana ny efitrano fampisehoana an-tserasera izahay amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa amin'ny ekipanay amin'ny Internet. Ny ankamaroan'ny seho tsy an-tserasera dia nofoanana tamin'ity taona ity. Ny fampisehoana an-tserasera ho fomba vaovao amin'ny orinasa dia azo ekena kokoa noho ny teo aloha. Toa lasa fomba mahazatra ho an'ny orinasa iraisam-pirenena izany amin'ny ho avy. Ireo seho an-tserasera 2 ireo dia haharitra 3-4 volana. Vonona izahay ary Tongasoa amin'ny fanadihadiana!